बिहानै हेलिकप्टर दु’र्घटना , बाउ छोरी सहित ९ जनाको एकै चिहान ! «
बिहानै हेलिकप्टर दु’र्घटना , बाउ छोरी सहित ९ जनाको एकै चिहान !
Published : 27 January, 2020 9:21 pm
हेलिकप्टर दु’र्घटनामा चर्चित अमेरिकी बास्केटबल खेलाडी को’बे ब्रा’यन्टको नि’धन भएको छ। क्यालिफोर्नियाको क्या’लाबास शहरमा भएको दु’र्घटनामा उनी, उनकी छोरी जि’याना सहित ९ जनाको मृ’त्यु भएको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ।
४१ वर्षिय ब्रा’यन्टसहित ९ व्यक्ति सवार निजी हेलिकप्टर ख’सेपछि त्यसमा ठूलो वि’स्फोटसहित आ’गलागी भएको थियो। लस ए’न्जल्स का’उन्टी शे’र्रिफले घ’टनामा कोही पनि जि’वित नभेटिएको जनाएको छ।
घ’टना त्यहाँको स्थानिय समय अनुसार बिहान १० बजे भएको थियो। पाँच पटक एनबिए च्या’म्पियन रहिसकेका ब्रा’यन्टलाई बास्केट बल इतिहासकै महान खेलाडीमध्येको एक मानिन्छ।
उनको नि’धनमा सेलिब्रेटी तथा उनका समकालिन खेल स्टारहरूले उनको अ’सामयिक नि’धनमा ग’हिरो शो’क व्यक्त गरेका छन्। ‘हुन सक्दैन, भगवान यो होइन, यो हुनै सक्दैन’ बास्केटबल खेलाडी के’भिन ल’भले आफ्नो ट्विटरमा लेखेका छन्।
त्यसैगरी ए’नबिएले एक वक्तव्य जारी गर्दै ‘को’बे ब्रा’यन्ट र उनकी १३ वर्षिया छोरीको ज्या’न जाने गरी भएको घ’टनाबाट आफूहरु अ’त्यन्त दु’खी भएको’ बताएको छ। ‘२० सिजनसम्म को’बेले हामीलाई अ’तुलनिय प्रतिभाको शतप्रतिशत ल’गनले कस्तो जि’त हात पार्न सकिन्छ भन्ने देखाएका थिए’ जारी व’क्तव्यमा भनिएको छ।